मधेश मेरो चेतन, अवचेतनमा सधैँ हस्तक्षेप गर्न आइरहन्छ – CentralKhabar – No 1 Online News Portal from Nepal
मधेश मेरो चेतन, अवचेतनमा सधैँ हस्तक्षेप गर्न आइरहन्छ
सेन्ट्रल डेस्क प्रकाशित मिति : ३१ श्रावण २०७८, आईतवार १६:५६
साहित्यकार नयनराज पाण्डे समाजका वृहत् विषयवस्तु विशेषत: सिमान्तकृत मधेस र मधेसीका मुद्दा आफ्ना कृतिमा छर्लंङ उतार्छन् । मधेसको समाज, संस्कृति, मनोवृति, उत्पीडन अन्तरहृदयबाट बुझेका पाण्डे सरल शब्दशिल्पमा यथार्थ कथा बुन्न माहिर छन् । उनी नेपाली साहित्यमा मधेसीको समवेदना, कथा-व्यथालाई साहित्यमा स्थापित गर्न सफल पनि भएका छन् । उनका सबैजसो कृति सिमान्तकृत पात्रलाई मियोको रुपमा स्थापित गर्न सफल छन् ।
आफ्ना प्रमुख कृति ‘उलार‘मा सीमान्त जनताको संघर्षकथा, चर्चित उपन्यास ‘लु’मा भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रको नेपाली जनजीवनलाई मार्मिकरुपमा व्यक्त गरेका छन् । हालै प्रकाशित उनका कथासङ्ग्रह ‘जीयरा’ मधेस र त्याँहाका सत्ताकृत तथा नीतिगत उत्पीडनलाई आक्रामक ढंगले कथेका छन् ।
सेन्ट्रलखबरका लागि संजय सुमनले साहित्यकार नयनराज पाण्डेसँग गरेको छोटो संवाद प्रस्तुत गरिएको छ :
विशेषत: मधेसकै विषयवस्तु / मुद्दामा लेखिरहनु भएको छ । यसको खास अर्थ के हो र कसरी शुरु भयो ? केही विशेष सन्दर्भ छ कि ?
मधेशमा हुर्केँ । मधेशसित स्वाद, वास्ना, सपना, भाषा, र संवेदनाको साइनो छ । त्यसैले मधेश मेरो चेतन, अवचेतनमा सधैँ हस्तक्षेप गर्न आइरहन्छ । अरू ठूलो कारण केही छैन ।
यति लेख्नलाई पक्कै पनि मधेशबारे गहन अध्ययन, अनुसन्धान वा भोगाइको प्रत्यक्षीकरण गर्नु भएको होला ? साहित्यमा यी मुद्दाहरू सजिलै पच्छ । राजनीतिकरुपमा उठ्दा अतिरञ्‍जित बनाइन्छ । तपाईंले यी मुद्दाहरूमा लेखिरहँदा केही अप्ठ्यारो भएको अनुभव गर्नु भएको छ की ?
मैले लेख्ने नै मधेशका मुद्दाहरू उठाउनकै लागि हो । त्यसैले अप्ठ्यारो अर्थहीन हुन्छ मेरालागि । म शब्द मार्फत् राजनीति गरिरहेछु । ढिलो चाँडो मेरो राजनीतिले गन्तव्य अवश्य भेट्छ ।
मधेशको पृष्ठभूमिमा लेखिएका साहित्य सिर्जना मधेशको त्यहि वर्गसम्म पुगेको छ त ? मधेशका पाठकको प्रतिक्रिया केही बुझ्नु भएको छ ? कस्तो छ, विशेषत: हालसालै प्रकाशित ‘ जियारा ‘ बारे ?
मधेशका विषयमा लेख्नु मधेशीका लागिमात्र लेख्नु हैन । मधेश र मधेशको दुःखलाई फिटिक्कै नबुझ्ने समाजमा रहेका पटमूर्खहरूलाई बुझाउन लेखेको हुँ ।
हुन त यो पाठकबाट आउने कुरा हो । अघिल्लो कृतिहरूभन्दा ‘जियारा ‘ के विशेषताले पृथक छ ? भन्न मिल्छ भने ।
जियरा लेख्दा मभित्र सत्तासित अझै बढी रिस थियो । मभित्र पहिलाभन्दा बढ्ता आगो थियो । त्यसैले जियराका कथामा आवेग र आवेश बढी भएको हुनसक्छ ।
मधेशमा बोलिने ( अबधी ) भाषा मज्जाले प्रयोग गर्नु हुन्छ ? कसरी सिक्नु भयो ? बोल्नु पनि हुन्छ की ?
मधेशको तातो र धुलोसँगै मधेश मभित्र खर्लप्प बसेको छ । त्यसैले मधेशलाई अभिव्यक्त गर्न भाषा र भावनाको मलाई समस्या पर्दैन ।
एमालेको आन्तरिक एकताबारे छलफल